Akuru | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atụmatụ kacha mma maka ilekọta afọ
Ebube bu ugbo ahihia kwa ubochi site n'ulo ndi nwanyi. E nwere ihe dịka ụdị osisi 20 nwere ike ịchọta na kọntinent America. Osisi nke osisi dị ka azaleas. Ebube bụ ịma mma mbụ n'etiti ezinụlọ ya, a na-ejikarị ya eme ihe n'ubi ubi. Ị ma?
Kedu esi chebe "Katidral" ugwo site na oria na pests
N'oge oge mmepe mmepe nke ugbo ugbo, ọ dị mfe ịchọta ụdị ube nke kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ụfọdụ. E nwere ọtụtụ pears, site na nchịkọta ndị a na-akpọ "ọrụ". "Ụdị ọrụ" na-anwale oge na iche pears. Ndị a na-agụnye "katidral" pear, merie ịhụnanya nke ndị na-elekọta ubi n'ihi na ọ dị mfe nlekọta na ihe a ga-ahụ anya.
Kwesịrị ekwesị na-akụ ma na-elekọta periwinkle
Periwinkle bụ okooko osisi mara mma ma na-adọrọ adọrọ, a na-ejikarị ya eme ihe na osisi na okooko osisi mgbe ọ na-achọ ubi, ogige ntụrụndụ na okporo ụzọ. Taa, e nwere ihe dị ka osisi iri na abụọ nke osisi a, nke ọ bụla nwere ihe ndị ọzọ dị na ya, ma mgbe ha tolitere, ha niile chọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Mgbe ịgha mkpụrụ pasili na mmiri, na-eto eto n'ubi
Pasili bụ otu n'ime osisi ndị mbụ na-atọ ụtọ na mmiri na elu na àgwà mara mma. N'ihi nnukwu ọdịnaya nke vitamin na microelements, a na-eji ya eme ihe ma na nri na na nkà mmụta ọgwụ. Ndị na-akọ ubi na-ekwu na ezi akuku nke pasili na oge opupu ihe ubi na-emeghe ala ga-enye oke owuwe ihe ubi.
Esi lekọta osisi epiphyllum
Epiphyllum cactus bụ osisi epiphytic nke nwere mgbọrọgwụ ikuku. Ulo nke ifuru nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha agba odo ma ọ bụ nke na-agba ọsọ, na-agba ma ọ bụ na-agba ya gburugburu. Osisi ahụ ruru elu 60-70 cm, ya mere ọ chọrọ nkwado. Okpokoro ahụ nwere ọdịdị olulu, ogologo ya nwere ike iru 40 cm. Osisi nke cactus nwere pink, acha ọcha, ọbara ọbara, odo odo, odo odo, mmiri ha dị iche n'etiti 10-12 cm.
Chokeberry nwere ezigbo ihe mgbochi, ya mere, ọrịa na pests na-echegbu ya nke ukwuu. Otú ọ dị, enwere ike nke ọrịa ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnọdụ ebe, ihu igwe, nso nso na osisi ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịma ụdị pests na ọrịa ndị a ga-ezute mgbe ị na-eto chokeberry iji zere nsogbu na osisi ahụ.
Ọrịa Plum: mgbochi, ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ
Nkume nkume bụ otu n'ime ubi a na-akọkarị. Dịka mkpụrụ osisi ndị ọzọ na osisi osisi, osisi pọmasị na-ebute ngwa ngwa site na pests na emetụta ọrịa dị iche iche. Iji mee ka ihe ubi a bụrụ ihe na-atọ ụtọ, owuwe ihe ubi ahụ dịkwa oke mma, onye ọ bụla na-elekọta ubi aghaghị ịma ọrịa "na ihu" ma nwee ike imeri ha.
Achịcha bụ otu n'ime okooko osisi ndị a kacha mara amara maka ịkpụchasị ya. Ọ na-etolite na oghe ala na greenhouses. Okooko ohia na ugbo na adighi adighi anwu oria nke oria di iche iche. I nweghi ike ikwu maka osisi griin ha, nke nje bacteria, oria, nje na-emetụta.
Akụkụ nke na-eto eto Chabo: na-agha mkpụrụ maka seedlings ma na-elekọta ubi
Taa, anyị ga-elekwasị anya na ịba ụba Chabo n'ọhịa. Ufuru osisi a na-ahuta ifuru a n'anya n'eziokwu na site na ụbọchị mbụ nke oge okpomọkụ ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ, ihe ọkụkụ ahụ nwere okooko osisi ndị nwere ike ịkpụ dịka onyinye ma ọ bụ jiri mee ihe. Nri Shabo na-eto ruo 60 cm, otu oge na-eto eto na-enyekwa aka ya ka ọ bụrụ okooko osisi 35.
Esi ewepu nchara na osisi
Okwu ahụ bụ "nchara" nke jikọtara ya na metal. Ọ na-apụta na a na-akpọkwa ya ọrịa ụdị ọrịa dị iche iche nke osisi dị iche iche, nke nwere ike ibibi ọtụtụ ihe ọkụkụ ahụ, ma ọ bụrụ na ọ gaghị eme ya. Kedu ihe bụ nchara dị ize ndụ Rust ọ bụghị nanị na ọ ga-emebi ihe dị na osisi ahụ, kama na-ebibi ya n'ime.
Kedu ụdị carrot dị mma maka ịkụ na Urals? Kedu ihe dị iche n'etiti akwụkwọ nri na-eto eto na mpaghara a?
Mkpụrụ osisi dị iche iche nke dị na "Cherripalchiki": nkọwa na njirimara nke ngwakọ F1
Burenki "Yaroslavl" ọmụmụ - otu n'ime ndị nnọchianya kasị mma nke ntụziaka nke mmiri ara ehi
Ihe kachasị mmasị okpokoro dịgasị iche iche bụ Laura ma ọ bụ mkpụrụ vaịn Flora.
Ụdị broccoli kachasị ewu ewu